GO'AAN: Man United Oo Dalab Cusub Oo Heshiis Kordhin Ah Hordhigtay David De Gea Iyo Go'aan Wayn Oo Uu Ka Qaatay. - Gool24.Net
Maamulka Manchester United ayaa ku dhibtoonaya sidii ay xal ugu heli lahaayeen dhibaatada goolhaye David De Gea ee heshiis kordhintiisa.
Manchester United ayaa 18 kii bilood ee la soo dhaafay waxay wada xaajood kula jireen wakiilada David De Gea balse ilaa hadda waxaa sii socda ismari waaga labada dhinaca ay waxba ku heshiin waayeen.
Wargayska The Sun ayaa shaaciyay in maamulka Man United ay dalab cusub hor dhigeen wakiilada David De Gea si uu goolhayaha reer Spain mustaqbalkiisa ugu hibeeyo Old Trafford.
Laakiin De Gea ayaa qaatay go’aan wayn wuxuuna markale diiday in uu saxiixo heshiiska cusub ee ay Man United miiska u soo saartay iyada oo sababtu ay wali tahay mid dhaqaale.
Man United ayaan dalabkeeda gaadhsiin £350,000 kun oo gini in David De Gea uu todobaadkii ka qaadan karo kooxdeeda kaas oo ahaa shuruudii ay wakiilada De Gea ku xidheen maamulka United.
David De Gea ayaa haysta dalab wayn oo ay kooxda Paris Saint-Germain u soo bandhigtay kaas oo ah in kooxdeeda uu todobaadkii mushaar ahaan uga qaadan doono £400,000 kun oo gini waana lacag ayna United doonayn in ay De Gea mushaar ahaan u siiso.
Man United ayaa wax ka baratay qaladkii waynaa ee ay ku sameeyeen heshiiskii Alexis Sanchez kaas oo ay ka dhigeen xidiga Premier league ugu mushaarka qaalisan taas oo keentay in De Gea uu isna dalbaday mushaar labaad ee ugu qaalisan.
Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayay dhabar jab wayn ku tahay in De Gea uu iska diiday dalabka heshiiska cusub ee ay Man United u soo bandhigtay maadaama oo ay arintan si xun saamayn ugu yeelatay maskaxdiisa iyo qaab ciyaareedkiisii fiicnaa.
Goolhaye De Gea ayaa xili ciyaareedkan Premier league ku soo qaatay qaab ciyaareedkiisii abid ugu xumaa iyada oo lagu eedeeyay in arinta heshiis kordhintiisa Old Trafford ay maskaxda ka qastay.
PSG ayaa doonaysa in ay 60 milyan gini kula wareegto De Gea isla markaana ay lacag dhan £400,000 kun oo gini ay todobaadkii mushaar u siin doonto haddii uu xagaagan ku soo biiro.
Laakiin haddii ay Man United go’aan ku gaadho in De Gea ay ku qasabto in uu sanadka ugu danbeeya ee heshiiskan dhamaysto waxay PSG diyaar u tahay in ay sugto oo ay si xor ah kula wareegto De Gea.